Ciyaartoyda Caanka ah ee Zidane iyo Ronaldo oo Dheelaya Ciyaar Dadka Soomaaliyeed ee ka dhursugayaan | puntlandforum.com
Ciyaartoyda Caanka ah ee Zidane iyo Ronaldo oo Dheelaya Ciyaar Dadka Soomaaliyeed ee ka dhursugayaan September 29, 2011 Xidigaha Caanka ah ee Reer Brazil iyo Farnce Ronalko iyo Zidane ayaa lagu wadaa in ay kala hogaamiyaan Ciyaar loogu tala galay in loogu gurmado abaaraha geeska Afrika ku dhuftay gaar ahaan Soomaaliya.
Ciyaartan oo la filayo in ay ka dhacdo Dalka Jarmalka ayaa waxaa kala hogaamin doona labadaasi xidig ee Zidane iyo Ronaldo iyadoona ay Ciyaartaasi soo agaasintay Hay’ada Qaramada Midoobay oo uga gon leh in halkaasi kasoo baxaan lacagao loogu gurmadao abaaraha Soomaaliya.
Labada Ciyaartoy oo bayaan wada jir ah soo saaray ayaa waxa ay shegeen in ay ku faraxsanyihin Ciyaartaasi ayna diyaar uyihiin in ay u gurmadaan walaalahooda ay abaartu aafeesay ee kunool Geeska Afrika.
Ciyaartan ayaana waxa ka dhursugaya Soomaali badan oo abaarta ay saameesay iyadona lacaga kazoo baxa lafilayo in wax looga qabto Abaaraha Soomaaliya.
Ciyaartan logu gurmanayo Abaaraha Geeska Afrika e kala hogaaminayaan Ronalkdo iyo Zidane ayaa lagu wada ain ay kadhacdo Dalka Jarmalka 13-Decemper iyadoona la filayo in ciyaartaasi ay dadweyne fara badan kasoo qeyb galaan kana soo abxaanb lacago loogu gurmado dadka ay abaartu hayso.